मरेको श्रीमतिको लाससङ्ग लगनगाठो गरेपछी श्रीमानले छाति पिटदै रोएको दृश्यले थामिएन सारा गाउलेको आशु – Classic Khabar
July 30, 2021 204
इलामको माइ नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कालीखोलाको भीर जंगलमा एकजना २१ वर्षीय युवती निर्मला राईको ला’स झु’न्डि’एको अवस्थामा भेटिएकी छ। उनको ला’स झु’न्डिए’को अवस्थामा शरी’रले माटोलाई छो’एको अवस्थामा भेटिएको भनेर माइती पक्षले बताएका छन्। यसलाई माइतीपक्षले शंकाको दृस्टीले हेरेका छन्। श्रीमानले छाति पि’ट दै रुदा म’ला मिहरुकाे रु’वा’बासि संगै मरेकाे श्रीमतिकाे ला’स सङ्ग लगन गा’ठाे गरेको भिडियो मा देख्न सकिन्छ।
उनीहरू पनि अहिले घ’टना स्थलमा आइपुगेका छन्। यसो हेर्दा झु”न्डि-एर नै म”रेको जस्तो देखिन्छ र च्याउ टिप्न भनेर आउँदा सुरुमा उनकै श्रीमानले देखेर बचाउन सकिन्छ कि भनेर डो”री का”टि’दि’एछन् र क’रा उँदै मान्छेहरू समेत बोलाएका रहेछन्,भनेर स्थानीय विनोद लिम्बूले जानकारी दिए। त्यहाँ आउने प्रत्यक्षदर्शी हरूले झु न्डि- एकै अवस्थामा देखेका थिए भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनको श्रीमानसँग बुझ्दा खासै म-र्नुपर्ने खालको कुनै पनि कारण नभएको बताएका छन्।
अहिले लासलाई पो ष्ट मार्ट मका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। उनी भी’रबाट लडेर रुखमा अड्केको जस्तो पनि देखिन्छ र उनको साथमा एउटा डोरी समेत छ। उनले त्यहीँको स्थानीय वडा अध्यक्षको छोरीलाई बिहे गरेका थिए। उनको बिहे गरेको करिब एकबर्ष जति भएको थियो। घ’ट’नाको बारेमा अ’नुसन्धान गर्न भनेर जिल्ला बाट इन्स्पे’क्टरको टोली समेत आइसकेको छ। घ’टनाबारे विस्तृत छलफल गरिने बताइएको छ।
Prev२ भतीजहरुले आफ्नै काकिलाई जब .….
Nextयो ‘एम सि सि के हो ? अहिले सम्मकै ड-रलाग्दो ठुलो खुलासा, यदि लागु भए के हुन सक्छ ? तेसैले नो एम सि सि – भिडियो सहित
माधव नेपाल पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा केपी ओली मुख्य अतिथि
हस्पिटलमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गरेर बचाऊदा बचाउदै आफैलाई कोरोना संक्रमण भएपछी नर्स सावित्री भट्टराईको दुखद निधन
चलचित्र प्राविधिकका लागी अमेरिकाबाट नायिका जल शाह र रमेश उप्रतीले गरे आर्थिक सहयोग